येशूले भविष्यमा हाम्रो लागि के गर्नुहुनेछ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मले माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
येशूले भविष्यमा हाम्रो लागि के गर्नुहुनेछ?
इ.सं. ३३ मा येशू मर्नुभयो, ब्यूँतनुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो। लामो समय कुरेपछि मात्र सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता यहोवाबाट उहाँले शासन गर्ने अख्तियार पाउनुभयो। (दानियल ७:१३, १४) भविष्यमा उहाँले राजाको रूपमा यस पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनुहुनेछ र गरिबी हटाउनुहुनेछ।—भजन ७२:७, ८, १३ पढ्नुहोस्।
राजाको रूपमा येशूले यस पृथ्वीबाट दुष्टता हटाउनुहुनेछ
राजाको रूपमा येशूले मानिसजातिको लागि आश्चर्यजनक कामहरू गर्नुहुनेछ। यहोवाले दिनुभएको शक्ति प्रयोग गरेर उहाँले मानिसजातिलाई फेरि खोटरहित बनाउनुहुनेछ। मानिसजातिले यसै पृथ्वीमा बुढेसकाल र मृत्युविना आनन्दका साथ जीवन बिताउनेछन्‌।—यूहन्ना ५:२६-२९; १ कोरिन्थी १५:२५, २६ पढ्नुहोस्।
येशू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?
येशूका साँचो चेलाहरूले संसारभरि परमेश्वरको राज्यबारे प्रचार गरिरहेका छन्‌। ती चेलाहरू घरघर गएर बाइबलमा बताइएको त्यस राज्यबारे मानिसहरूलाई सुनाइरहेका छन्‌। येशू अहिले ती चेलाहरूलाई चाहिने मदत दिंदै हुनुहुन्छ। प्रचार गर्ने यो काम यस दुष्ट संसारको अन्त नभएसम्म चलिरहनेछ। त्यतिबेलासम्मै मदत गर्छु भनेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो।—मत्ती २४:१४; २८:१९, २० पढ्नुहोस्।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई कसरी आनन्दित जीवन बिताउन सकिन्छ भनेर मण्डलीमार्फत सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यस दुष्ट रीतिरिवाजको अन्तसम्म मात्र होइन तर परमेश्वरले ल्याउने नयाँ संसारसम्मै डोऱ्याउनुहुनेछ।—२ पत्रुस ३:७, १३; प्रकाश ७:१७ पढ्नुहोस्।
विश्‍वास र उपासना येसु परमेश्‍वरको राज्य
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
प्रहरीधरहरा भगवान्‌लाई किन पुकार्ने?
येसुले कसरी मानिसहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ?